Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Giant E-Commerce Shinoa Hanangana Airline Vaovao
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao • People • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Mpanorina ny JD.com Richard Li
Ny fanamboarana kaompaniam-pitaterana entana vaovao dia tonga satria ny mpifaninana amin'ny JD.com miady amin'ny varotra an-tserasera Alibaba Group Holding LTd dia nanitatra ny sambo. YTO Cargo Airlines, fananan'ny YTO Express tohanan'ny Alibaba, dia mampiditra ireo mpitatitra entana niova fo avy amin'ny fiaramanidina 767 sy 777.
Ny kaompaniam-pitaterana entana vaovao dia hiorina ao amin'ny faritany atsinanan'i Jiangsu any Jiang.
Jiangsu Jingdong Cargo Airlines dia nahazo fankatoavana mialoha ny lalàna handefasana mpitatitra vaovao.
Ny zotram-piaramanidina dia mikasa ny hampiasa fiaramanidina Boeing 737-800 ho an'ny fiaramanidina.
The Fitantanana ny sidina sivily any Sina (CAAC) nanambara fa Suqian Jindong Zhanrui Enterprise Management, fehezin'ny JD.com Mpanorina Richard Liu, nahazo alalana hanangana kaompaniam-pitaterana entana vaovao monina any amin'ny faritany atsinanan'i Jiangsu.
Jiangsu Jingdong Cargo Airlines, manana renivola voasoratra anarana mitentina 600 tapitrisa yuan ($ 92.83 tapitrisa), dia nahazo alalana ara-dalàna mialoha hanombohana mpitatitra vaovao, hoy ny mpandrindra ny fiaramanidina sinoa tamin'ny fampandrenesana iray.
Orinasa iray fehezin'ny mpanorina ny jeneraly e-commerce any JD.com Inc. no handray anjara 75% amin'ny renivohitra mpanorina raha ny Airport Group any Nantong, tanàna any Jiangsu, no hanome ny ambiny, araka ny CAAC.
Araka ny fanamarihan'ny CAAC, misy zotram-piaramanidina vaovao mikasa ny hampiasa fiaramanidina Boeing 737-800 ho an'ny fiaramanidiny.
Boeing, izay sahirana any Shina amin'ny fivarotana fiaramanidina mpandeha, dia manjaka amin'ny tsenan'ny mpitatitra entana manerantany.
Niakatra be ny tahan'ny mpitatitra entana an'habakabaka, nateraky ny fanitarana fiantsenana an-tserasera vokatry ny areti-mandringana.